Ọ dịghị ụbọchị ọmụmụ ka mma! Ndị na-agụ nri 500! | Martech Zone
Ọdịnaya, Rihanna, Oge… ndị a bụ ihe atọ na m na-agwa ndị ahịa m banyere mgbe ọ gbasara ịde blọgụ. Fọdụ ndị na-eche na ịde blọgụ bụ mbọ ị na-agba - ọkachasị mgbe ị na-ekwu maka ịde blọgụ nke gị. N'ezie, esemokwu ahụ bụ ihe kpatara mmadụ ga-eji gee gị ntị ma ọ bụrụ na ị dị ọ bụghị ịga nke ọma? Ana m etinye ọnụọgụ ndepụta ma debe ọkwa Technorati na ozi ndị ọzọ nke oge a ka m wee nwee ike inye ihe akaebe nke ihe ịga nke ọma nke isiokwu m.
Echi bụ ncheta ọmụmụ m. M na-agbakarị nkịtị ụbọchị ọmụmụ m maka na obu ubochi na adighi nma. N'oge na-adịbeghị anya, ọ ghọọ izu nke ọdachi (tinye ugbu a Virginia Tech na ndepụta egwu nke ihe omume).
Agbanyeghị, enweghị m ike inye aka mana tinye eserese a ma kelee gị maka ndị ncheta ụbọchị ọmụmụ kacha mma nke nwa okorobịa nwere ike ịrịọ! (E wezụga ụmụ m na AppleTV na Bill na Carla nwetara m.)
M kụrụ ihe karịrị ndị na-agụ 500 maka nri m taa!
Ekele dịrị onye ọ bụla maka ịrapara n'ahụ! Di na nwunye ole na ole gara aga Enyere m akwụkwọ ozi 500th. Anọgidere m na-agbalị ịwube ukwu content, m ahuhu dị ike dị ka mgbe ọ bụla, na ọkụ nke blọọgụ m na-aga n'ihu! Agụrụ m ebe naanị 1% nke ndị ọbịa ga-aza ajụjụ. Ọ bụrụ na ihere anaghị eme gị, ya adị m ka ọ masịghị gị, mara na m nwere ekele maka ụlọ ọrụ gị!
Otu ihe dị mkpa: Ekele pụrụ iche nye John Chow onye mere ka m nwee mgbanwe ụfọdụ iji dọtakwuo ndị na-agụ akwụkwọ na ndepụta m. Ga-ahụ obere ederede n'okpuru isiokwu na-akpọ gị òkù isonye na ndepụta m. Ọzọkwa, ana m enye mgbasa ozi maka afọ n'efu nke nnabata n'ime ndepụta m. Site na ndụmọdụ John, echere m na m mego ihe nkwado RSS m dị ntakịrị. Daalụ John!
Tags: john chowNgụgụ isiRSSteknụzụmmeri
Thunderbird abịarute! Featuresfọdụ atụmatụ na-egbu egbu, ndị ọzọ kwesịrị igbu!
Ekele dịrị ụbọchị 500 na n'isi ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ!
Kwesịrị nke ọma, jigide ọdịnaya dị ukwuu ma ị ga - anọ na 1000 n'oge na - adịghị anya!
ekele na ụbọchị ọmụmụ!
Congrats Doug, kwesịrị nnọọ!
james kingsted - Nweta ozi
Enwere m obi ụtọ maka gị, ekele na ụbọchị ọmụmụ!
N’oge na-adịbeghị anya m malitere ịgụ blọọgụ gị, echere m na ọ bụ ezigbo akụ. Ekwenyesiri m ike na ị bara uru bara uru. Nke 500 bụ ihe magburu onwe ya. Nọgidenụ na-arụ ọrụ ọma m na-atụ anya na-agụ gị ga-eme n'ọdịnihu posts.
Daalụ maka obiọma okwu James! A na-anabata nzaghachi dị ka nke a. 🙂
Ekele, na ihe niile kacha mma maka ụbọchị ncheta ọmụmụ 29 gị 😉
… Na nnukwu nri ụbọchị ọmụmụ, ahụike, na n'isi-2500 na Technorati.
Daalụ Martin. Na-apụ 10 afọ, ọ bụ ezie. Otu uzo na agadi, nke ozo na ntozu. Agaghị m ekwu nke bụ, ọ bụ ezie! 🙂
Ekele n'ezie Doug ..
500 ndepụta na-agụ bụ pụtara pụtara feat .. Ọ dị na-egosi mgbalị ị na na na na na-akwagide ha ..
Ezi ọrụ ma na-aga n'ihu
Ndeewonu! Nke ahụ bụ nnukwu ọrụ! BTW, nke ahụ dị mma na-eto eto.
Daalụ Thor. Echere m na usoro uto bụ ihe akaebe na ume karịa ihe ọ bụla ọzọ. M ga-enwe mmasị n'ezie itinye ụfọdụ nyocha ọnụ ọgụgụ na ọnụ ọgụgụ nke oge na-aga site na nsonaazụ ọchụchọ na ntinye. Ekwenyesiri m ike na e nwere ezigbo mmekọrịta n’ebe ahụ. Otu ụbọchị, m ga-eme mgbakọ na mwepụ!
Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ, ma na-ekele gị na # 500! Daalụ maka ihe ị mere.
Doug, congrats. Kpamkpam kwesịrị. Enwere m mmasị na saịtị gị na ọdịnaya ya. Nọgide na-arụ ọrụ dị ukwuu. Na, Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ.
Hey Doug - tozọ ịga! Dabere na nnukwu ọdịnaya ị nyere, m nzọ ụzọ 1000 ga-adị ngwa.